I-Acoustic Enclousure, i-China Acoustic Enclousure Abavelisi, abaXhasi, abaFektri -I-NANTONG RONGHENG YENDALO YOKUSINGQONGILEYO., LTD.
Ikhaya>iimveliso>Iimveliso ze-Acoustic>Ukuvalelwa kwe-Acoustic
Igumbi le-SIR lokugquma isandi luthotho lwemveliso oluphuhliswe yinkampani yethu ukuphucula imeko ye-acoustic kunye nolondolozo lwezixhobo kwingxolo yeentlobo ezahlukeneyo zezixhobo ezifana ne-air compressors, ii-blots blowers, i-screw compressors, iimpompo ezinkulu zamanzi, iimpompo zokucoca kunye njalo njalo.
Uthotho lwee-SIR zamagumbi okusonga ayilelwe ngamanye amagumbi ezixhobo ukwahlula izixhobo ezinengxolo ephezulu kwimveliso nakwindawo yokuhlala kwaye uzibeke ngaphandle kangangoko kunokwenzeka. Akukho sidingo sokwakha igumbi lezixhobo elahlukileyo xa usebenzisa le mveliso.
● Ukupheliswa kwevolumu enkulu: irediyo ye-bandwidth, ngenxa yokusebenzisa i-anti-air vents, inokunciphisa ngempumelelo ingxolo ephezulu kunye nengxolo ephantsi;
● Ukungenisa umoya kunye nokusasaza ubushushu: uxinzelelo oluqinisekileyo lokunyanzelwa komoya, ukusebenza kakuhle komoya, ubomi obude be fan yomoya;
● Ukungenisa umoya kunye ne-muffler: Ewe, usebenzisa i-impedance edityaniswe nomoya ongcolileyo;
● Indlela yokubekwa: Inokubekwa ngaphandle okanye ngaphakathi (kungabikho dreyini yophahla kunye noyilo lokuhambisa ngaphakathi);
● Inkangeleko entle: ipeyinti ye-antirust inokwenziwa xa ibekwe ngaphandle;
● Ukukhanya kwangaphakathi: Ukukhanya kwe-LED, ukugcina amandla kunye nokugcina amandla, kunokwenziwa ngokwezifiso kwaye kudibaniswe nokuvula umnyango ohambayo;
● Ukupholisa: izixhobo zokufaka amanzi;
● Ukukhuseleka kombane: umhlaba wonke, kunye nokukhuselwa kokuvuza;
● Ulondolozo olulula: indawo enkulu yangaphakathi, eyilelwe ngomnyango osecaleni wokutsala ulondolozo;
◆ Ukucinywa: ibhendi yamaxesha asezantsi 12 ~ 15dB (A); aqhelelkileyo ingxolo 15 ~ 25dB (A)
Volume Umthamo womoya: Umthamo womoya ubalwe ngokungqongqo ukuqinisekisa ukuba umthamo otyebileyo womoya usenokuwuhlaziya ngokukhawuleza umoya wangaphakathi phantsi kwesiseko esingaphezulu kokungena kwizixhobo zangaphakathi;
Products Iimveliso ezisebenzayo: Isiguquli somoya, iiRoot blower, isixhobo sokucinezela, impompo enkulu yamanzi, impompo yokucoca, iintlobo ezahlukeneyo zamanzi anengxolo ephezulu okanye izixhobo zoomatshini;